चालु राम्रो छ र खराब छ
हामी निस्सन्देह, सबै बराबर र समान रूपमा "मानव" हो, तर हामी सबैको फिजियोलोजी पनि व्यक्तिगत रूपरेखा छ। उदाहरणका लागि, दौडिँदै: बिहानको कुनै व्यक्तिले बलियो र बलको पूर्ण आपूर्तिको साथ चिसो स्नान र एक रन, र अर्को, हड्डीमा एथलीट, र कल्पना गर्न सक्दैन कसरी बिहानको कुनैपनि गतिविधि सम्भव छ। त्यहि कुरा अर्को तरिकामा हुन्छ - कसैको दौडको लागि काम थकान पछि सजिलो हुन्छ, र कसैले पहिले नै शक्तिशाली र मुख्यसँग भिडिरहेको छ। यस अवस्थामा, दुवै उदाहरणहरू साँच्चै एथलेटिक व्यक्ति हुन सक्छन्।
दौडका फाइदाहरू र हानिकारकहरूलाई धेरै भनिएको छ, मूलतया, यो चलिरहेको छ जब यो "उपयोगी" चलिरहेको छ। निर्दोषताको लागि यस्तो कठोर प्रतिक्रिया नदेखाउनुहोस् - यदि तपाइँसँग भेदभाव छैन भने दौड सँधै उपयोगी छ। त्यो डाक्टरले तपाईंलाई कस्तो जवाफ दिनेछ।
प्रायः विरोधीहरूले बिहानको रोजगारी गर्छन्। र यो बुझ्न योग्य छ, किनभने "उल्लू" र "लार्क" नाटकहरूको अनुपात पहिलोको हातमा छ। तिनीहरूको लागि, लाभ वा हानि बिहानको दौड हो - पनि प्रश्न होइन। यो "स्पष्ट" हो कि शरीर जागिर पछि बिहानको व्यायामको लागि तयार छैन, तपाईंलाई नाश्ता गर्न, कफी पीका , "सबै जगेडा" सबै अंगहरू जरुरी छ। र तिनीहरूको लागि व्यक्तिगत रूपमा, यो साँच्चिकै हानिकारक छ, किनभने यी व्यक्तिहरूका लागि शारीरिक तवरले हरेक अतिरिक्त मिनेट जुन बिहानको बिस्तारमा बिताइएको थियो महत्त्वपूर्ण छ।
तर "छाला" भन्नेछ कि बिहान मात्र एकमात्र समय हो जब एक व्यक्ति आफूलाई जागृत गर्दछ जब सम्म आफूलाई आफुको हो। केही साटो अघि उठ्नका लागि पर्याप्त छ र तपाईंकोसँग पहिले नै रनको लागि समय हो- कुन कुरा राम्रो हुन सक्छ?
तथ्य यो कि साँझको दौडको लाभ वा हानि धेरै कम छ। "उल्लू" को लागि यो उपयोगी छ, किनकी यो 8 घन्टा को नजिकै छ कि उनको शरीर आराम र काम को लागि तयार छ। "लर्क" को लागि - हानिकारक छ, किनभने तिनीहरूका शारीरिक क्रियाकलापमा कमी आएको छ, जसको मतलब साँस , रक्त परिसंचरण, र मांसपेशीको काम बिहानै भन्दा बढि सुस्त हुनेछ।
त्यो छ, सब केहि धेरै रिश्तेदार छ। त्यो कसैले उपयोगी छ, अर्को हानिकारक हो। मुख्य कुरा महसुस गर्न र तपाईंको शरीरले यो बेलामा दौडिरहेको छ।
क्षेत्र स्ट्राबेरी - उपयोगी गुण र विनाशकारी
प्रोटीनमा कुन खानाहरू उच्च छन्?
कालो मुलाका फाइदाहरू
स्ट्राबेरी जाम - क्यालोरीटिक सामग्री
स्वास्थ्य र वजन घटाने को लागि लुची को लाभ
ब्लूबेरीका लागि उपयोगी के हो?
Dandelions बाट जाम को लागि उपयोगी छ?
तिल तेल - उपयोगी गुण र विनाशकारी
सोड-जडीबुटी - औषधीय गुण र व्यञ्जनहरु
लेखांकन मा व्यापार ब्यालेन्स के छ र यसलाई कसरी गणना गर्न सकिन्छ?
Miley साइरसले त्यो क्रिसमसलाई कसरी मनाए र त्यो उपहारको रूपमा के प्राप्त गरे
पाइन पागलहरू राम्रो छन्
एलिसिया सिल्भरस्टोनले जनावरहरूको सुरक्षाको खातिर पूर्णतया रोक लगायो
बच्चाले2वर्षमा के गर्नु पर्छ?
विवाहको परम्परा र परम्पराहरु
कसरी वजन घटानेको लागि पोलिसोरब लिनु हुन्छ?
क्रूसको सपना कस्तो छ?
अनियमित बोर्डबाट बाड़
2016 मा मखमेटबाट ड्रेस गर्नुहोस्
के यो खारिज क्षमा गर्न सम्भव छ?
स्ट्रीट एलईडी गेडाल्याण्ड मा घर
प्रेमी लाइट 2013
बच्चाहरूको लागि Viferon
हॉलको लागि पर्ख
घरमा अनुहारको छाला कसले कडा पार्छ?
पास्ताले पनीरको ओवनमा